Jamie Carragher: Oo Tilmaamay Cida Ay Saarneyd Masuuliyada Daafaca Liverpool Ee Kulanka Liecester
Home Horyaalka Ingiriiska Jamie Carragher: oo tilmaamay Cida ay saarneyd masuuliyada Daafaca Liverpool ee Kulanka...
Ciyaaryahankii hore ee Liverpool captain Jamie Carragher ayaa ku tilmaamay Thiago Alcantara “in ay saarneyd masuuliyad daafac ahaan” ka dib markii sabtida ay guuldarro 3-1 inay Leicester City ee Premier League.
Reds ayaa hogaanka ciyaarta kula wareegtay King Power Stadium iyada oo uu u dhaliyay Mohamed Salah laakiin waxa laga dhaliyay seddex jeer qeybihii dambe si ay u la kulanto guuldaradoodii seddexaad ee isku xigta ee Premier League.
Kooxda heysata horyaalka Ingariiska ayaa mar kale ku dhibtooday difaac madaama ay seddex dhibcood kale iska dhaceen, Carragher ayaa isna baraha bulshada ku dhaleeceeyay waxqabadka Thiago ee Foxes.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Spain ayaa ku biiray Reds xagaagii ka dib toddobo sano oo uu la joogay Bayern Munich, halkaasoo uu kula guuleystay 7 horyaal oo Bundesliga ah iyo hal koob oo Champions League ah.
Liverpool ayaa haatan 13 dhibcood ka dambeysa kooxda hogaanka heysa ee Manchester City, oo iyagana kulan u harsanyahay, halka Reds ay kaliya hal dhibic ka sarreyso kooxda kaalinta 5aad ee Chelsea madaama ay u dagaalamayaan inay sii xajistaan ​​booskooda Champions League.
Previous articleZinedine Zidane oo albaabada ufurey shaqada tababarenimo ee Xulka France
Next articleOleksandr Zinchenko ” Jawiga kooxda waxa uu uu i xasuusinayaa ku Guuleysiga Hoyraalka ugu danbeeyay ee Kooxda”